China Oral Sampling Foam Swab-Round Head ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | J.able
1. သင်၏မေးမြန်းမှုကို 24 နာရီအတွင်း အကြောင်းပြန်ပါ။
2. GMP စက်ရုံ၊ လုံခြုံပြီး အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်ကို သင့်ထံ ကမ်းလှမ်းပါ။
3. စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းရနိုင်သည်။ OEM & ODM ကြိုဆိုပါတယ်။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်ပြီး ကျွမ်းကျင်သော အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဝန်ထမ်းများမှ သင့်အား သီးသန့်နှင့် ထူးထူးခြားခြား ဖြေရှင်းချက် ပေးနိုင်ပါသည်။
5. သင့်ဖြန့်ဖြူးသူထံ ပေးအပ်ထားသော အထူးလျှော့စျေးနှင့် အရောင်းဧရိယာကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း။
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သုတေသနအဖွဲ့အစည်းများစွာနှင့် အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အများစုသည် CE၊ FDA၊ ISO13485၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်လက်မှတ်များ၊ Biocompatibility test နှင့် SGS အစီရင်ခံစာကို ရရှိထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသော လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ထုတ်ကုန်အသစ်များ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိသည်။ အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်၏ လုပ်ငန်းနိယာမကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် cervices၊ အရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်းများကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကြားတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ဂုဏ်သတင်းကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM နှင့် ODM အမိန့်များကို ကြိုဆိုပါသည်။
သင့်တွင် ထုတ်ကုန်များအတွက် စိတ်ကူးသစ်များ သို့မဟုတ် အယူအဆများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်နှင့်လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် သင့်အား စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသောထုတ်ကုန်များကို ယူဆောင်လာပေးပါသည်။
နောက်တစ်ခု: Male Urinary Sampling Swab
Self Standing Centrifuge Tubes များ, Buccal Swab စုဆောင်းမှုအစုံ, Nasopharyngeal Swab ကလေးအထူးကု, Falcon Centrifuge Tubes 15ml, Viral Transport Media Kit, Sterile Microcentrifuge Tubes များ,